FX Hunter EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
နိုဝင်ဘာလ 20, 2019
ပင်မစာမျက်နှာFX Hunter EA ၏FX Hunter EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် FX Hunter EA ၏ 0
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့နိုဝင်ဘာလ 2019
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့နိုဝင်ဘာလ 2019 - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ - FX စက်ရုပ်
Arbitron EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Arbitron EA ၏
စျေးနှုန်း: $ 799 (ONE TIME ကငွေပေးချေအစီအစဉ်, အခမဲ့ updates & FULL VENDOR အတွက်အထောက်အပံ့)
ငွေကြေးအားလုံး: မဆို (AUDUSD, EURUSD, EURJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCHF နှင့် USDJPY အကြံပြုကြသည်)
မှတ်ချက်: တစ်ဦး၏2ကွဲပြားခြားနားသော packages များရှိပါတယ် ...
Ghost Trader EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
စျေးနှုန်း - € 499 (1 အစစ်အမှန် & အကန့်အသတ်မဲ့ Demo စာရင်းများ၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်အထောက်အပံ့များအတွက်လျှော့စျေး)
ငွေကြေးအတွဲများ - AUDCHF, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF, NZ …
FXAdept EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Metatrader4များအတွက်အကောင်းဆုံး Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး (MT4) ပလက်ဖောင်း
FXAdept EA ၏အမြတ်ဖြစ်ပါတယ် ...
ငွေကြေးစွမ်း: EURUSD, EURCHF, EURGBP, EURCAD, USDCAD, USDCHF, GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF နှင့် CADCHF
မှတ်ချက်: တင်းကြပ်စွာ LIMITED disc ...
မှတ်ချက်: Now ကိုသင်တို့အပေါ်မှာစာရင်းသွင်းခြင်းမဝယ်နိုင် FX Hunter EA ၏ 1 မှ6လ!
1- လတိတိ subscription ... တစ်လကို $ 29
3- လတိတိ subscription ... $ 69 (လျှော့စျေး 20%)
6- လတိတိ subscription ... $121 (လျှော့စျေး 30%)
FX Hunter EA ၏ ဆန်းစစ်ခြင်း - ဤ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးနှင့်အတူတိကျမှန်ကန်သော Shots
FX Hunter EA ၏ မျိုးဆက်သစ်ဇယားကွက်ဖြစ်ပါသည် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ထို ", စျေးပေါဝယ်လို့မြင့်သောရောင်းချရန်" နိယာမကို အသုံးပြု. အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဤသည် built-in ညွှန်းကိန်း၏အချက်ပြမှုများကို အသုံးပြု. ရာထူးဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သည်နှင့်, အရှိဆုံးကိစ္စများတွင်, ဒီအလွန်တိကျမှန်ကန် entries တွေကိုရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီအလွန်အမင်းအရည်စျေးကွက်အပေါ်, ထို Forex ဖြစ်ပါသည်, အမြဲတမ်းစျေးနှုန်းအလိုရှိသောဦးတည်ချက်သို့တိုက်ရိုက်သွားပါလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မပေးပါဘူး။ entry ကိုထိုအလုံအလောက်တိကျမှုမရဖြစ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင် FX Hunter EA ၏ အလွန်ထင်ထွက် martingale နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုပြီးထိန်းချုပ်မှုပွင့်လင်းရာထူး။ ပွင့်လင်းအမိန့်ပစ်မှတ် (ယူအကျိုးအမြတ်များ၏အဆင့်) အထိရောက်ရှိခဲ့သည်အခါအလိုအလျှောက်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့ခြင်းတောင်းထဲသို့အုပ်စုဖွဲ့နေကြသည်။ ဤနည်းဗျူဟာရေတိုရေရှည်ကုန်သွယ်သို့မဟုတ်ဦးရေပြားကိုမသုံးပါဘူး။
ကွပ်မျက်အမိန့် FX Hunter EA ၏ စျေးကွက်အမိန့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်ဒါခေါ်ခြင်းတောင်းထဲသို့ထည့်သွင်းထားပါသည်။ စျေးနှုန်းကွာဟချက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် - - အချို့ကိစ္စများတွင်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးတိကျကိုအသုံးပြုသည် Buy-Stop / ရောင်း-Stop အမိန့်။ ဇယားကွက်ဂျီသြမေတြီကိုထိန်းချုပ်ရန်အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်နည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်းမသက်ဆိုင်လက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေများ (slippage, တိုးမြှင့န့်, etc) ၏ပွင့်လင်းခြင်းတောင်းတစ်ခုနီးပါးစုံလင်သောဂျီသြမေတြီသည်။ အဆိုပါခွင့်ပြုသောသူအပေါင်းတို့သည် Forex စက်ရုပ် ပင်တကယ် High-သက်ရောက်မှုသတင်းစဉ်အတွင်းမည်သည့်ဈေးကွက်အခြေအနေများအတွက်အောင်မြင်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့။
ဤ ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး သို့သော်သင်ပြဿနာများမပါဘဲလုပျနိုငျအချို့ကုန်သွယ် parameters တွေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုလျှင်, တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ FX Hunter EA ၏ အားလုံးငွေကြေးအားလုံးနှင့်အတူအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကို အသုံးပြု. အကြံပြု AUDCAD, AUDNZD, EURSGD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD, NZDCAD နှင့် NZDUSD 15 မိနစ်အချိန်ဘောင်ပေါ်မှာ။
FX Hunter EA ၏ သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကဖှံ့ဖွိုးတိုးပါ!
၏အသုံးပြုမှုကို Make FX Hunter EA ၏ နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
ခင်မှာ Forex Trading ၏စက်ရုပ်အကြောင်းကြားပြီမဟုတ်လော
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် FX Hunter EA ၏ အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဒါဟာသင်ပြန်ထိုင်အနားယူနှင့်ရိုးရှင်းစွာ FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်က၎င်း၏လှည့်ကွက်ပြုပါစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ automated Forex မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ ဘောင်, အကြေးခွံနှင့်သင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကန့်သတ်သငျသညျပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ FX Hunter EA ၏ အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ 24 /5ပေါ်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကျန်ရှိနေပါတယ်။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအတွက်အမတူဘဲ FX Hunter EA ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးစွယ်-of-the-ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချကြလိမ့်မည် တကယ်တော့ကအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ compile ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမျး၌အရမသွားပါစေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
FX Hunter EA ၏ - ထရေးဒင်း Logic, Setup ကိုထိုအခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
FX Hunter EA ၏ အချို့သောနာရီအတွင်းအရောင်းအ, လာမယ့်စုံတွဲနာရီသို့မဟုတ်နေ့ရက်ကာလအဘို့စျေးနှုန်းညှနျကွားခပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်ကြီးမြတ်အမြတ်အစွန်းရရှိမညျနှင့်နေ့တိုင်းအရောင်းအဖွင့်လှစ်။
ဤ FX စက်ရုပ် အပေါ်အရောင်းအ AUDCAD, AUDNZD, EURSGD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD, NZDCAD နှင့် NZDUSD. သင့်ရဲ့သိုက် $ 5000 ထက်လျော့နည်းသည်ဆိုပါက, သင်တို့ရှိသမျှပွဲစားကကမ်းလှမ်းမဟုတ်ကြောင်းတစ်ရာခိုင်နှုန်းအကောင့်ဖွင့်လှစ်သင့်ပါသည်။
ထိုအတူပျက်ကွက်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် FX Hunter EA ၏။ ဒီကုန်သွယ် software ကိုအာမခံမယ့်များ၏ဖန်တီးရှင် 60% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: သင်ဤ EA ၏စိတ်ကျေနပ်မှုမဟုတျပါလျှင်, ရောင်းချသူငွေပေးချေသည့်ရက်စွဲပြီးနောက် 100 ရက်အတွင်း 30% ပြန်အမ်းငွေအာမခံပါသည်။ ကိုယ်ကသာအပြည့်အဝလိုင်စင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
FX Hunter EA ၏ မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 499 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
ထိုတရားဝင် FX Hunter EA ၏ website ကိုကြည့်ရှု
အကောင်းဆုံးအစဉ်အဆက် 5m မဟာဗျူဟာ Forex
အကောင်းဆုံးကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့
အကောင်းဆုံး Forex 4h ဗျူဟာ
အကောင်းဆုံး Forex စက်ရုပ် EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Forex Hunter EA ၏
Forex Hunter EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Forex Hunter ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
FX Hunter ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Forex steroids EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Big Bull FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း